Today Breaking News | आज २०७७ भदौ २५ गतेका मुख्य समाचार | Public 24Khabar
Home News Today Breaking News | आज २०७७ भदौ २५ गतेका मुख्य समाचार
Today Breaking News | आज २०७७ भदौ २५ गतेका मुख्य समाचार
Today Breaking News | आज २०७७ भदौ २५ गतेका मुख्य समाचार.
आज भदाै २५ गते बिहीबार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
वि.सं.२०७७ भदौ -२५,बिहीवार, ई.सं.२०२० September – १० ,शक संवत्-१९४२,नेपाल संवत्-११४० ञलगा, प्रमादी, दक्षिणायन, वर्षा, आश्विन कृष्णपक्ष तिथि-अष्टमी , २२:४८ बजे उप्रान्त नवमी,नक्षत्र-रोहिणी , १०:३९ बजे उप्रान्त मृगशिरा, योग-वज्र , १६:५२ बजे उप्रान्त सिद्धि,करण-वालव १०:२० बजेदेखि कौलव , २२:४८ बजे उप्रान्त वणिज,चन्द्रराशि-वृष, आनन्दादि योग-उत्पात, सूर्योदय-५:४७, सूर्यास्त-१८:१२दिनमान-३१ घडी ०३ पला, व्रत/पर्व-अष्टमी श्राद्ध,अष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा, जितिया पर्व, जीवत्पुत्रिका व्रत।
मेष – बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बढ्नेछ । सभा–समारोहमा मान–पुरस्कार प्राप्त हुनेछ । आरोग्यता बढ्ला । विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्ला । आशा उत्साह बढ्नेछ । आयस्रोत बढ्ला । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । ऋण रोग र शत्रुसित लड्ने क्षमता बढ्ला । मनोकुलको काममा सफलता मिल्नेछ ।
बृष – नयाँ सफलता प्राप्त हुनेछ । आरोग्यता बढ्नेछ । सुख आनन्द प्राप्त होला । मिठो भोजन मिल्नेछ । वार्तामा सफलता मिल्नेछ । मान पुरस्कार मिल्नेछ । नयाँ कार्य र नयाँ दायित्वको लागि राम्रो दिन छ । व्यस्तता बढ्नेछ । विद्या बुद्धि बढ्नेछ । कला साहित्य गीत संगीतमा आकर्षण बढ्ला ।
मिथुन – मिठो भोजन प्राप्त होला । शुभ काममा आकर्षण बढ्नेछ । यात्रा हुने र सुख समृद्धि बढ्ने सम्भावना रहनेछ । आरोग्यता बढ्ला । आयातनिर्यातसित सम्बन्धित काम बन्ला । लेखन–प्रकाशनसित सम्बन्धित काम बन्ला । विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्नेछ । आशा आँट उत्साहमा बढोत्तरी हुनेछ ।
कर्कट – खेलकुद भ्रमणमा आकर्षण बढ्ला । हांसविलासमा रुचि बढ्ला । समस्याको समाधान मिल्नेछ । कार्यव्यापारमा सफलता मिल्नेछ । जोखिममा नपर्नु बेस होला ।
सिंह – आयवर्द्धक कार्य बन्नेछ । उन्नति पदोन्नति हुनेछ । हाकिमको साथ प्राप्त होला । आर्थिक र बौद्धिक प्रगति होला । रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बलियो बन्नेछ । वार्तामा सफलता मिल्नेछ । प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ला । सभासमारोहमा मान पुरस्कार भेटिनेछ ।
कन्या – यात्रापरक काममा रुचि बढ्ला । उन्नति पदोन्नति हुनेछ । सुख आनन्द बढ्ला । मान महत्त्व यश धनसम्पत्तिमा वृद्धि हुनेछ । ऋण रोग र शत्रुसित लड्ने क्षमता बढ्नेछ । भाग्योदय होला । मनोकूलको काम बन्ला । रसरागमा वृद्धि हुनेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । उच्चाधिकारीको सहयोग मिल्नेछ । इष्टमित्रको साथ मिल्नेछ ।
तुला – आयमूलक कर्ममा रुचि बढ्नेछ । शुभ काममा सफलता मिल्नेछ । शैक्षिक, बौद्धिक, साहित्यीक, रचनात्मक आदि कार्यमा सफलता मिल्नेछ । आयातनिर्यातसित सम्बन्धित काम बन्नेछ । लेखन प्रकाशनसित सम्बन्धित काम बन्नेछ । साझेदारीको काम बन्ला । मिठो भोजन मिल्नेछ ।
वृश्चिक – रोकिएको काम बन्ला । नयाँ काममा उत्साहजनक सफलता मिल्नेछ । व्यस्तता बढ्नेछ । समयबाट बढी फाइदा लिनु हितकर रहला । राजकाजमा सफलता मिल्नेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ । विवाद आदिमा पर्नुबाट बच्नुहोला ।अरुको भर नपर्नु बेस होला ।
धनु – समयले साथ दिनेछ । कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । यश वर्चश्व वृद्धि हुनेछ । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ । पारिवारिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । श्रेष्ठ व्यक्तिको साथ मिल्नेछ । ऋण रोग र शत्रुलाई जित्ने क्षमता बढ्ला । नयाँ दायित्व पाउनुहुनेछ । मनोकूलको काम बन्नेछ । आँट उत्साह बढ्ला । मान पुरस्कार मिल्नेछ ।
मकर – साहसिक काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । इष्टमित्र सन्तान सुख मिल्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक काम बन्नेछ । सफलता मिल्नेछ । शुभ समाचार मिल्नेछ । मान महता बढ्ला । सुख आनन्दमा वृद्धि हुनेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । बोली र व्यक्तित्नको प्रभाव बलियो बन्नेछ । धन सम्पत्ति पद महत्व बढ्नेछ ।
कुम्भ – खेलकुद भ्रमणमा आकर्षण बढ्ला । मिठो भोजन मिल्नेछ । आरोग्यता बढ्नुको साथै आर्थिक कार्यमा पनि सफलता पाउनुहुनेछ । उत्साह बढ्ला । सुख समृद्धि बढ्ला । लोभ लालच इर्ष्या द्वेषमा नियन्त्रण राख्नुपर्ला । कार्यव्यपारको क्षेत्रमा पनि सफल हुनुहुनेछ ।
मीन – विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्ने छ । साथीभाइको सहयोग प्राप्त हुनेछ । समस्याको समाधान मिल्नेछ । आरोग्यता बढ्ला । मान महत्त्वमा वृद्धि हुनेछ । आशा उत्साह जाग्नेछ । आँट साहस बढ्नेछ । धैर्यले काम लिनु हितकर रहला ।
Previous articleपुण्य गौतम खाना खान पुगे रत्नपार्क ! पत्रकारसंग पर्यो चर्काचर्की, सडकमै पलेटी कसेर कपाकप
Next articleपसल कहिले कहिले खोल्न पाईन्छ ?